Kuti udzivise kukuvara kana uchishandisa wiricheya, unofanira kukwanisa kuziva chinokonzera kukuvara pakutanga. Kukuvara kwakanyanya kunowanikwa kubva pakushandisa wiricheya kunosanganisira pfudzi, ruoko, gokora, ruoko, uye ruoko. Kukuvara kunogona kusanganisira zvinyoro nyoro, kukuvara kwetsinga, kupwanya, kupwanya, uye kupokana. Pazasi […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau	| Tagged isina kurema wheelchair, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu	Leave mhinduro
Hezvino zvinhu zvisere zvekurega kutaura kumunhu ari pawiricheya: "Ini ndaifanira kushandisa wiricheya kwekanguva kamwe, saka ndinoziva chaizvo zvauri kutarisana nazvo." Chokwadi ndechekuti, hauzive kuti mumwe munhu anonzwa sei. Unogona kunge wakambotora nguva uri pawiricheya ye […]
Mawiricheya anogona kudhura. Saka munhu anowana sei wiricheya nemari shoma pasina mari? Pazasi pane dzimwe nzira dzaunogona kuwana wiricheya nemari yepasi kana isina mari. Ndokumbirawo kuti murambe muchifunga izvi zvakapusa kutarisa. Medicare YeMedare kuti ubhadhare chemawiricheya yemawoko, unofanirwa kunge uine mamiriro ekuti […]
Ko kufamba kwewiricheya kwakasvika sei kureva zvazvinoita nhasi? Mufambiro wewiricheya ndiko kugona kufamba-famba nekushandisa wiricheya kana mudziyo unofambiswa nemagetsi kubatsira kusimudzira hupenyu hwevanhu vasingakwanise kufamba. kufamba kwewiricheya kunogona kuwedzerwa nenzira dzakawanda dzakasiyana. Munhoroondo yese, kufamba kwakagadziridzwa […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, Time Machine, hwiricheya, Wiricheya Nhau	| Tagged isina kurema wheelchair, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu	Leave mhinduro
Kugadzirisa Mawiricheya Wiricheya
Kugadzirisa vhiri pawiricheya kunogona kuve nyore kwazvo zvichienderana nerudzi rwevhiri rinaro. Chimwe chinhu mavhiri anofanirwa kuendeswa kuzvitoro zvinogadzirisa kuboora sezvitoro zvebhasikoro zvine michina chaiyo. Dzimwe nguva vhiri harigone kugadziriswa nekuda kweshinda dziri kushandiswa mudenga, kuboora zvichikonzera kubvaruka […]